Walt Hayer ၏ပြောင်းလဲမှုနောင်တစာအုပ်ဆိုင်
transtransisting မတိုင်မီဝေါ့ Heyer အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ် 10 နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သူ့မှာပြည့်စုံတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်
Grey ကတစ်ခုမှာအရိပ်။ စာရေးသူပက်ထရစ် Byrne
စာရေးသူပက်ထရစ် Byrne ကကျားမရေးရာလက္ခဏာကိုအသုံးချလေလေ၊ မရေရာမှု၊ မရေရာဒွိဟဖြစ်မှုများပြားလာခြင်းနှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည့်ဥပဒေရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခများကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
လိင်နှင့်လိင်အကြောင်း Little Grey ကစာအုပ်။ စာရေးသူပက်ထရစ် Byrne
လိင်နှင့်လိင်အပေါ် Little က Grey ကစာအုပ် transgenderism ၏သဘောတရား (ကနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူဒဿန "ယုံကြည်ချက်") မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ အဆိုပါလိင်ကမ္ဘာကြီးကိုရှုမြင်ဥပဒေများထက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အရည် "ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာ" ကိုအသိအမှတ်မပြု, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပုံသေဇီဝလိင်၏အရပျ၌သင့်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။
ရိုင်ယန်ကို T Anderson က - ဟယ်ရီ Sally ဖြစ်လာသည့်အခါ
ကောင်လေးတစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ "ပိတ်မိနေ" ရနိုင်သလား? ခေတ်သစ်ဆေးပညာလိင် "reassign" နိုင်သလား? ပထမဦးဆုံးအရပျ၌အကြှနျုပျတို့အား "တာဝန်ပေးအပ်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ရှိပါသလား? ကျား, မများ၏ပဋိပက္ခသဘောမျိုးကြုံနေရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှအများဆုံးမတ်ေတာရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘာလဲ? ငါတို့တရား "ကျား, မဝိသေသလက္ခဏာ" ၏ကိစ္စရပ်များအပေါ်အဘယ်သို့ပြောသင့်သလဲ
Wendy Francis က - Little ကမိန်းကလေးများလုပ်ထားတဲ့ဘာတွေလဲ
သူတို့ကမိန်းကလေးလား၊ ကောင်မလေးလားဆိုတာဘယ်သူမှမရွေးဘူး။ ပြီးတော့တစ်ခုကအခြားတစ်ခုထက်မကောင်းဘူး။ သို့သော်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသောအရာများဖြစ်သည်။
Wendy Francis က - ဖန်ဆင်း Little က Boys ဘာတွေလဲ
Little ကယောက်ျားလေးများယောက်ျားဖြစ်တက်မပေါက်ပါဘူး။ မိန်းကလေးများလိမ့်မည်ဘူး။ အဘယ်အရာကိုနည်းနည်းယောက်ျားလေးများဒီတော့အထူးစေသည်လား? ကောင်းပြီ, ထိုနှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားအကြောင်း။ သငျသညျအခြို့သောစဉ်းစားနိုင်သလား?
ဆရာများ၊ ရှေ့နေများနှင့်ကလေးသူငယ်သက်သာချောင်ချိရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဤလမ်းညွှန်ချက်ကိုမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းသားများအားလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာကျောင်းလမ်းညွှန်ချက်အသစ်များအရပေါ်ပေါက်လာသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကူညီဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။